Didy fandravana governemanta Nokianin-dRajaonarimampianina ny HCC
Manandafy Rakotonirina « Tena fanonganam-panjakana ny tamin’ny 2009»
Matotra kokoa sy azo ianteherana ny manodidina an’i Marc Ravalomanana noho ny an-dRajoelina satria fantatry ny olona ny nataon’ireo nandritra ny tetezamita, hoy ny filoha nasionalin’ny MFM Manandafy Rakotonirina omaly.
Mpanohana an’i Dada Mitombo isa ireo resy lahatra
Taorian’ilay fihaonana mivantan’ireo kandida ho filoham-pirenena 2 tonta ka hatramin’izao no nahitana fa resy lahatra amin’ny fandaharan’asan’ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana,
Vondron’olon-tsotra Miantso fisorohana korontana
Efa fantatry ny rehetra, hoy ry zareo avy eo anivon’ny vondron’olon-tsotra na VOT tarihin’ny filohany, Sarah Zoe, tetsy Ambohijatovo omaly, fa manohana ny kandida ho filoham-pirenena laharana faha 25, Marc Ravalomanana izahay.
Fomba fiadin’ny resy Mila vaniny sy mandrangaranga hery
Efa fomba fiadin’ny resy ny mila vaniny amin’ny resa-pifidianana tahaka izao.
Marc Ravalomanana Tian’ny any anindrana sy ny tambanivohitra ary ny manampahaizana
Nandiso tanteraka ny feo mandeha ankehitriny ny profesora James Ratsimba, filohan’ny fikambanana Asandratro ny fireneko omaly mikasika ny filazan’ny sasany fa tsy tian’ny any anindrana sy ny tambanivohitra ary ny manampahaizana ny kandida Ravalomanana.
Tena olon-kendry i Dada “Tsy hamaly ratsy ny ratsy isika”
Nanao fanambarana sy nilaza ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka Malagasy teny amin’ny trano fonenany teny Faravohitra ny kandida Marc Ravalomanana laharana faha-25 omaly.
Imbiky Herilaza “Tokony hampiseho ny roa tonta fa mendrika hitantana firenena”
“Tsara ny fanapahana nataon`ny CENI tamin`ny adihevitra amin`ny haino anan-jerim-panjakana satria misandrahaka manerana ny nosy sady ilain`ny vahoaka Malagasy ny fampafantarana ny vina sy programanasan`ny kandidà”,
Na ho tapitra rahampitso zoma 01 jona aza ny fe-potoana 7 andro tokony handravana ny governemanta, dia tsy mbola nisy resaka faharavana na fametraham-pialana faobe nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly teny Iavaloha notarihin-dRajaonarimampianina, fa nifototra tamin’ny fandefasana taratasy fangataham-panazavana teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC.
Tonga nanatitra izany teny amin’ny HCC eny Ambohidahy rahateo ny mpisolovavan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina omaly tolakandro. Mahakasika ny didy mitondra ny laharana 18-GCC/D3 taorian’ny fitorian’ny depioten’ny fanovana azy sy ny fitakiana ny fialany izy io, saingy zavatra hafa no nivoaka dia ny fandrodanana ny goverenemanta ao anatin’ny 7 andro monja nanomboka ny 25 mey nivoahan’ny didy izy io, ary efa nahazo ny fampahafantarana ny filoha. Ny zavatra hita sy tsapa dia iny didy iny no tsy hahafahan’ny firenena tsy hiverina amin’ny krizy intsony, hoy ireo mpisolovava. Misy zavatra manjavozavo ao anatin’izany, hany ka miteraka fandikana na “interprétations” samihafa ilay izy satria misy tsy mazava, ka tsara raha izy ireo namoaka didy no manazava kokoa ka izay indray no mitarika krizy ho antsika, hoy ny mpisolovava Charlotte Ramanase. Mavesa-danja loatra ny hahafahana manatanteraka soa aman-tsara iny didy navoakan’ny HCC tamin’ny 25 mey. Teboka miisa 2 no tena manjavozavavo, dia ny mikasika ny fe-potoana hanatanterahana ny didy sy mikasika ny fahefan’ny filoha, izay teren’ny HCC handika ny andinin-dalàna voalazan’ny lalàmpanorenana, hoy hatrany ireo mpisolovava ireo, hoy kosa ny mpisolovava Tantely Rakotonirina. Mba manangam-bovona amin’ny HCC ihany koa izany Rajaonarimampianina, izay efa tsy voahaisotra na nolazaina aza fa nandika lalàna, ary izy ireo indray no mbola mitady hianakendry. Malaina tanteraka amin’ny fandravana ny governemanta ny filoham-pirenena, ka mbola mitady hevitra hafa, ary izay no mahatonga azy ireo mitady fomba hanemorana izany amin’ny alalan’io fangataham-panazavana mety hampihemotra kely ny fanatanterahana ny didy na ny « recours en interprétation » io. Ho tapitra rahampitso ny fe-potoana nomen’ny HCC ny filoha handravana ny governemanta. Mihatra avy hatrany amin’ny antsipirihany ny didy raha tsy misy ny fifanarahana politika mipetraka ao anatin’ny 10 andro, ka ho hita eo indray izay hafitsoky ny HCC amin’ny famaliana ity fangatahana ity. Ny tsiliantsofina nivoaka avy any an-dapa no nahafantarana fa tena tsy levon’ny vavonin’ny filohan’ny Repoblika ilay didy miendrika baiko navoakan’ny HCC amin’ny hampitsarahana amin’ny asany ny praiminisitra sy ny governemanta ary tena nahatezitra azy .